Abụ Ọma 62 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 62:1-12
Ọ bụ Chineke ga-azọpụtali mmadụ
“M nwere ndidi, na-echere Chineke” (1, 5)
‘Gwanụ Chineke ihe niile dị unu n’obi’ (8)
Mmadụ bụ naanị ume e kupụrụ ekupụ (9)
Atụkwasịla akụnụba obi (10)
Ntụziaka e nyere onye na-eduzi abụ. Nke Jedutọn.* Abụ Devid. 62 N’eziokwu, m* nwere ndidi, na-echere Chineke. Ọ bụ ya na-azọpụta m.+ 2 N’eziokwu, ọ bụ ya bụ oké nkume m na onye na-azọpụta m, ebe m na-agbaba, aka aghara ịkpa m.+ E nweghị ihe ga-eme ka m daa.*+ 3 Olee mgbe unu ga-akwụsị iti mmadụ ihe ka unu tigbuo ya?+ E kwesịrị ize unu niile eze maka na unu dị ka mgbidi e ji nkume rụọ nke chọrọ ịda ada. 4 N’ihi na ha na-agba izu ka ha si ná nnukwu ọkwá mmadụ nọ kwatuo ya. Ịgha ụgha na-atọ ha ụtọ. Ha na-eji ọnụ ha agọzi mmadụ, ma na-abụ ya ọnụ n’obi ha.+ (Sila) 5 N’eziokwu, m nwere ndidi, na-echere Chineke,*+N’ihi na ọ bụ ya na-eme ka m nwee olileanya.+ 6 N’eziokwu, ọ bụ ya bụ oké nkume m na onye na-azọpụta m, ebe m na-agbaba, aka aghara ịkpa m. E nweghị ihe ga-eme ka m daa.*+ 7 Ọ bụ Chineke na-azọpụta m, na-emekwa ka a na-akwanyere m ùgwù. Chineke bụ oké nkume m siri ike na ebe mgbaba m.+ 8 Tụkwasịnụ ya obi mgbe niile. Gwanụ ya ihe niile dị unu n’obi.+ Chineke bụụrụ anyị ebe mgbaba.+ (Sila) 9 Ụmụ mmadụ bụ naanị ume e kupụrụ ekupụ. E nweghị ihe ụmụ mmadụ bụ.+ A tụọ ha n’ihe e ji atụ̀ ihe, ha aharughị ka ume e kupụrụ ekupụ.+ 10 Unu echela na irigbu mmadụ ga-eme ka ihe gaziere unuMa ọ bụ na izu ohi ga-eme ka ihe dịrị unu ná mma. Ọ bụrụ na unu akpatakwuo akụ̀, unu atụkwasịla ya obi.+ 11 Anụla m ka Chineke kwuru ugboro abụọ, sị: Ọ bụ Chineke nwe ike.+ 12 Jehova, ị na-egosi na ị hụrụ ndị mmadụ n’anya,*+N’ihi na ị na-akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe o mere.+
^ Ma ọ bụ “zọhie ụkwụ.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi m, nwee ndidi, chere Chineke.”
^ Ma ọ bụ “ka m zọhie ụkwụ.”
Abụ Ọma 62